China Cod Fish Collagen Peptide ifektri kanye nabaphakeli | I-Huayan
Ucingo: +86898 66553777
I-Cod Fish Collagen Peptide
Oligopeptide Yezinhlanzi Zasolwandle
I-Tilapia Fish Collagen Peptide
I-Bovine Collagen Peptide
I-peptide yomswenya womhlaba
I-Peptide yolwandle ikhukhamba
I-Cod Fish collagen Peptide uhlobo I-collagen peptide.Ikhishwa esikhunjeni senhlanzi, icutshungulwa yi-enzymatic hydrolysis emazingeni aphansi okushisa, Isetshenziswa kakhulu ezimbonini zokudla, ukunakekelwa kwezempilo, ezemithi nezimonyo.
Umthombo Wempahla: Isikhumba senhlanzi yasolwandle
Umbala: Mhlophe noma uphuzi ngokukhanyayo
Isimo: Powder 、 granule
Inqubo Yezobuchwepheshe: i-Enzymatic hydrolysis
Ukuhogela: Kunenhlanzi encane
Isisindo Yamamolekhula: 1000-3000Dal, 500-1000Dal, 300-500Dal
Amaprotheni: ≥ 90%
Izici zomkhiqizo: Ukuhlanzeka okuphezulu, akukho okufakiwe, i-collagen peptide emsulwa, kunuka kamnandi futhi kunambitheka kakhulu.
Iphakheji: 10KG / Bag, 1bag / ibhokisi, noma ngezifiso.
Ukusebenza kwe-cod collagen peptide:
Qinisa isikhumba bese ususa imibimbi: lungisa isikhumba esonakele, qinisa isikhumba bese uswakama isikhumba;
Ukubambezela ukuguga: ukuthuthukisa nokukhuthaza ukumunca isikhumba;
Ibala elimhlophe nelikhanyayo: ukuvimbela umsebenzi we-tyrosinase, ngaleyo ndlela kuvimbela ukubekwa kwe-melanin nokusheshisa imetabolism yesikhumba.
Amathambo namalunga aqinile: qinisa futhi uthuthukise ukwakheka okuyisisekelo kwamathambo namalunga, ubuyisele amathambo alimele, uthuthukise ukukhiqizwa, futhi ubeke kahle futhi uqinise i-calcium.
Hlanganisa izinwele nezinzipho: vimbela ukomiswa kwezinwele, ukuhlukaniswa phakathi futhi ugcine izinzipho zithambile;
Thuthukisa ukulala: iqukethe ama-amino acid ukuthuthukisa ikhwalithi yokulala, ikhulule ngempumelelo izinzwa futhi ikhuthaze ukulala okujulile.
Inqubo yezobuchwepheshe eqinile
Hlakulela imishini yokukhiqiza esezingeni eliphezulu nobuchwepheshe bokuhambisa ukwenziwa kwemikhiqizo esezingeni eliphakeme. Ulayini wokukhiqiza uqukethe ukuhlanza, i-enzymatic hydrolysis, ukuhlunga nokuhlunga, ukomisa isifutho, ukupakisha kwangaphakathi nangaphandle. Ukudluliswa kwezinto ngesikhathi senqubo yokukhiqiza kwenziwa ngamapayipi ukugwema ukungcoliswa okwenziwe ngabantu. Zonke izingxenye zemishini namapayipi athinta izinto zenziwe ngensimbi engagqwali, futhi awekho amapayipi angaboni emehlweni lapho kufile khona, okulungele ukuhlanzwa nokubulala amagciwane.
Ukulandeleka kwezinto zokusetshenziswa, ubuchwepheshe obuthuthukisiwe, obuphakeme kunezidingo zomthetho, ukuhlukaniswa kwemininingwane enemininingwane, ukuhlinzeka amakhasimende ngezinto ezisezingeni eliphakeme neziphephile.
Nikeza ukuqeqeshwa komkhiqizo kumakhasimende kwezentengiso, ezobuchwepheshe kanye nemakethe, futhi unikeze ngefomula ukwesekwa kwezobuchwepheshe kanye nezixazululo zomkhiqizo kumakhasimende.
I-Peptide Material Umthombo wezinto zokusetshenziswa Umsebenzi oyinhloko Inkambu yohlelo lokusebenza
I-Walnut Peptide Isidlo se-walnut Ubuchopho obunempilo, ukululama okusheshayo ekukhatheni, umphumela wokuthambisa UKUDLA OKUNEMPILO
IZIMPAHLA ZOKUNAKEKELA ISIKHUMBU
I-Pea Peptide Pea Amaphrotheni Thuthukisa ukukhula kwama-probiotic, anti-inflammatory, futhi uthuthukise amasosha omzimba
I-Soy Peptide Amaprotheni weSoy Buyisa ukukhathala,
anti-oxidation, amafutha aphansi,
Ubende Polypeptide Ubende benkomo Thuthukisa ukusebenza kwamasosha omzimba womuntu, vimbela futhi wehlise ukuvela kwezifo zokuphefumula
I-Earthworm Peptide Umsundu Womile Thuthukisa ukuzivikela komzimba, thuthukisa i-microcirculation, qeda i-thrombosis ne-thrombus ecacile, ugcine imithambo yegazi
I-Peptide yesibungu sowesilisa Isiphungumangathi sowesilisa Vikela isibindi, uthuthukise amasosha omzimba, ukhuthaze ukukhula, wehlise ushukela wegazi,
umfutho wegazi ophansi
Inyoka Polypeptide Inyoka emnyama Thuthukisa ukuzivikela komzimba,
ukulwa nomfutho wegazi ophezulu,
Inqubo Yezobuchwepheshe Bokukhiqiza:
Ukuhlanza isikhumba senhlanzi nokuhlanzisisa- i-enzymolysis - ukwahlukanisa- ukuncibilikisa kanye nokuhluza oketshezi oketshezi okomisiwe- ukumiswa komoya- ukugxilisa- inzalo- ukomisa isifutho- ukupakisha kwangaphakathi- ukuthola insimbi- ukupakisha kwangaphandle- ukuhlola- isitoreji
Isiphequluli sakho asiwasekeli amathegi evidiyo.
Ukuphathwa Kwekhwalithi Yomkhiqizo
Ilebhu yokwakha yensimbi egcwele ingamamitha-skwele ayi-1000, ihlukaniswe ngezindawo ezahlukahlukene zokusebenza njengegumbi le-microbiology, igumbi le-physics negumbi lamakhemikhali, igumbi lesisindo, ukushisa okuphezulu, igumbi lensimbi elinemba kanye negumbi lesampula. Ifakwe izinsimbi zokunemba ezinjengokusebenza okuphezulu kwesigaba samanzi, ukumuncwa kwe-athomu, i-chromatography yesendlalelo esincane, i-nitrogen analyzer, ne-analyzer yamafutha. Sungula futhi uthuthukise uhlelo lokuphathwa kwekhwalithi, bese udlulisa ISITIFIKETHI se-FDA, MUI, HALA, ISO22000, IS09001, HACCP nezinye izinhlelo.
Umnyango wokuphathwa kokukhiqiza uqukethe umnyango wezokukhiqiza kanye nomhlangano wokusebenzela wenza ama-oda wokukhiqiza, futhi iphuzu ngalinye lokulawula elisemqoka kusuka ekuthengweni kwempahla eluhlaza, ukugcinwa, ukondliwa, ukukhiqizwa, ukupakisha, ukuhlolwa kanye nokugcinwa kwempahla ekuphathweni kwenqubo yokukhiqiza iphethwe futhi ilawulwe ngabasebenzi abanolwazi lobuchwepheshe futhi abasebenzi bezokuphatha. Ifomula yokukhiqiza nenqubo yezobuchwepheshe kudlule ekuqinisekisweni okuqinile, futhi ikhwalithi yomkhiqizo inhle kakhulu futhi izinzile.
Langaphambilini I-peptide yomswenya womhlaba
Olandelayo: Oligopeptide Yezinhlanzi Zasolwandle
No.12 Meifeng Road, mei'an Science And Technology New Town, Haikou National High-tech Zone, Haikou Idolobha, Isifundazwe saseHainan, China.
© Copyright - 2010-20220: Wonke Amalungelo Agodliwe.